Dhageyso: Mid ka mid ah Masuuliyiintii taageersanaa Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe oo soo dhoweeyey Shirka Muqdisho ee dowlada ku baaqdey – idalenews.com
Dhageyso: Mid ka mid ah Masuuliyiintii taageersanaa Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe oo soo dhoweeyey Shirka Muqdisho ee dowlada ku baaqdey
“Qodobada Heshiiska waxaa kamid ahaa kow in dib u heshiisiinta in la iskugu imaado Muqdisho oo dowladda Federaalka dhigto gogosha shacabkiina waxay u diyaarsanyihiin gaar ahan kuwii khilaafku u dhexeeyay dagaalkuna dhex maray in shir la qabto dib u heshiisiin ah Muqdisho ayayna joogaan. ” ayuu yiri Awlibaax.
Hogaamiyaha maamulka Juba Axmed Madoobe ayaa si cad u sheegay inaysan tageen shirka Muqdisho ka dhacaya kaasi oo uu sheegay inuu yahay mid baalmarsan hishiiska Adis Ababa laakiin arrintaasi waa ganafka ku dhuftay oo diiday Awlibaax oo ka mid ahaa ragii wax kasoo dhisay maamulka Juba oo hadda Muqdisho u jooga ka qeybgalka shirkaasi.
Waxaana uu Awlibaax sheegay in masiirka Jubooyinka iyo Gedo uusan noqon doonin mid hal shaqsi kaliya ka taliyo, isaga iyo siyaasiyiin badana ay Muqdisho u joogaan arrintaasi, isagoona ka hadlaya waxa uu yiri .
” Axmed Madoobe haddii uusan tageyn isaga Muqdisho oo uusan ka qeybgaleyn shirka 21 bishan dowlada ku baaqday inay qabaneyso ,waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegayaa in aan Muqdisho aniga iyo madax kale u joogno ka qeybgalka shirka dowlada qabaneyso kaasi oo wajigiisa koowaad ka dhici doono, halka midka labaad aan dadaal ugu jirno inuuba Gedo ka dhaco” ayuu yiri Shiikh Awlibaax.
Hogaamiyaha Ahlusuna ayaa sidoo kale hadal aan horey looga baran oo ka dhan ah xaalka Kismaayo kaga dhawaaqay shirkaasi, isagoona sheegay in kismaayo aysan aheyn ammaan la isku haleyn karo oo lagu kulansiin karo dhamaan dhinacyada iska soo horjeeda.
” Kismaayo ma ahan ammaan la isku haleyn karo waana sababta aan u taageereyno ka qeybgalka shirka Muqdisho ka dhacaya kadibna aan ugu baaqeyno in shirka labaad uu ka dhaco Gedo oo ka ammaan badan Kismaayo ” ayuu yiri Shiikh Maxamed Yusuf Awlibaax.
” Haddii dib u hishiisiin dhab ah la qaban oo dadka la wada qancin ma filayo inuu dhismi doono maamul dhameystiran oo ka taliya Jubooyinka iyo Gedo, haddaba waxaan leeyahay dadka waa inay wada taageeraan shirka Muqdisho oo ay yimaadan” ayuu yiri mar kale Awlibaax.
Hadalka Awlibaax hadda kasoo yeeray ayaa u muuqda inuu jiro khilaaf xoogan oo kala dhexgalay isaga iyo ragii kale oo ay soo wada dhisteen maamulka Juba. Waxaana baryihii ugu danbeeyey laga waayey kasoo muuqashada shirarka iyo kulamada ay leeyihiin madaxda maamulka Juba, taasi oo dad badan ku macneeyn jireen inuu jiro khilaaf hoosaad ka dhexeeya isaga iyo maamulka.
Awlibaax ayaa ilaa hadda waxa uu yahay siyaasiga kaliya ee maamulka Juba wax kasoo dhisay ee taageeray shirka Muqidisho islamarkaana hadda Muqdisho arrintaasi u jooga, waxaana muuqata inu waji siyaasadeed cusub rabo inoo ka ciyaaro dhanka dowlada Soomaaliya, lamase yaqaan waxa ay saaxiibadiisii hore ee Axmed Madoobe iyo Gen, Fartaag uga jawaabi doonaan hadalka Awlibaax.
Shirkan jaraa’id ayuu Awlibaax ammaan ugu soo jeediyey IGAD doorkeeda ku aadan xal u helida arrimaha Jubooyinka iyo Gedo. Waxaana uu dowlada Soomaaliya ka dalbaday inay shirka Muqdisho ku casumaan IGAD si ay wax badan uga ogaadaan wadahadalka shacabka gobolladaasi degan dhexmari doono.
Daawo dood loo qabtey maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland